သက်သတ်လွတ်စားလျှင် ပရိုတင်းနှင့် ခွန်အား ရရှိနိုင်ပါ့မလား? | Ensure
သက်သတ်လွတ်စားလျှင် ပရိုတင်းနှင့် ခွန်အား ရရှိနိုင်ပါ့မလား?
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာများက မိမိတို့အား အသားဟင်းလျှာများထက် သက်သတ်လွတ်စားဖို့ လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်လာကြသည်။ သက်သတ်လွတ်စားခြင်းသည် တိုးတက်လာပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့မှ ရရှိသော အာဟာရကို ရွေးချယ်လာကြသည်။ အဆိုပါ ရေစီးကြောင်းမှ မေးခွန်းများ ပေါ်ထွက်လာရသည်။ သက်သတ်လွတ်စားခြင်းသည် ပရိုတင်းနှင့် ခွန်အားကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါ့မလား ဆိုသည့် အခြင်းအရာဖြစ်သည်။ သက်သတ်လွတ်ဟင်းလျာသည် အသားဟင်းလျာနှင့် ယှဉ်လျှင် ပရိုတင်းဓာတ် တူညီနိုင်ပါ့မလား?
အထက်ပါမေးခွန်းများအတွက် အဖြေထုတ်ရပါမူ: ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည် လူတစ်ဦးအတွက် လိုအပ်သည့် ပရိုတင်းနှင့် ခွန်အားတို့အား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
အတိအကျဆိုရလျှင် အားကစားသမားများနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလိုက်စားသူများသည်ပင် သက်သတ်လွတ်စားပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ Arizona State တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာချက်တစ်ခုအရ အသားစားသူများနှင့် သက်သတ်လွတ် အားကစားသမားများ၏ ခွန်အား၊ ခံနိုင်ရည်အား၊ ကြွက်သားပမာနတို့သည် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ အဓိကအချက်မှာ ကြွက်သားအတွက် လိုအပ်သည့် အာဟာရ ရရှိရန် သက်သတ်လွတ်ဟင်းလျာကို စီမံတွက်ချက်ရန် လိုအပ်သည်။
ပရိုတင်းသည် သက်ကြီးအစားအသောက်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် အခြားဓာတ် ၉ ခု ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ leucine, isoleucine, histidine, valine, threonine, methionine, phenylalanine, tryptophan, နှင့် lysine တို့ဖြစ်သည်။ ပရိုတင်းတွင် အမိုင်နိုအက်ဆစ်မျိုးကွဲပေါင်း ၂၀ ပါဝင်သော်လည်း ကျန် ၁၁ ခုမှာ မလိုအပ်ပေ။
အာဟာရ ကြွမ်းကျင်သူများ ညွှန်ထားသည့် အမိုင်နိုအက်ဆစ် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ခြင်းသည် မိမိတို့ စားသုံးသည့် ပရိုတင်းနှင့် အဓိက သက်ဆိုင်သည်။ အသားမှရရှိသော ပရိုတင်း၏ အမိုင်နိုအက်ဆစ်သည် လူသားများ၏ ဆဲလ်တို့နှင့် တူညီပြီး အပင်များနှင့် ဇီဝဓာတ်ကို ယှဉ်လျှင် ပိုမိုများပြားသည်။ ထိုအချက်သည် အပင်များမှ ရရှိသော ပရိုတင်းသည် မကောင်းဟု ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပေ။ လိုအပ်သည့် အမိုင်နိုအက်ဆစ် ရရှိဖို့ နေ့စဉ်အစားအသောက်တွင် ပရိုတင်း စုံလင်စွာ စားသုံးရမည်။
သက်သတ်လွတ်သည် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ကောင်းသလား?
သက်သတ်လွတ်ကို အာဟာရနှင့် အစားအသောက် အကယ်ဒမီအရ ဆိုရသော် နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာနှင့် type2ဆီးချို၊ သွေးတွင်းအဆီဓာတ်၊ သွေးပေါင်ချိန်၊ BMI၊ သွေးတိုးတို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါသည်။
အရှင်းဆုံး ဆိုရလျှင် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား အောက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးများ ဖြစ်ထွန်းစေသည်။
သက်သတ်လွတ်စားခြင်းသည် ဆဲလ်တစ်ခု၏ Chromosome တွင် တွေ့ရသော အမ်ဇိုင်းမ်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်သည့် Telomere ဖြစ်စဉ်ကို တိုးတက်စေသည်။
၂။ ဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
သက်သတ်လွတ်စားခြင်းသည် အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့နည်းစေပြီး ပန်းပွင့်စိမ်း၊ ပန်းမုန်လာပွင့်တို့သည် ဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
ခွန်အားသည် အစားအသောက်နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ အစာချေစနစ်သည် အသားထက် အသီးအရွက်ကို ပိုမိုချေဖျက်ပေးနိုင်ပြီး တစ်နေ့တာအတွက် ခွန်အားကို ပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
အခြားအရာများမှ ပရိုတင်းကို ရရှိနေလျှင် ပုံမှန်အစားအစာမှ အသားကို မစားလျှင် ရရှိနိုင်သည့် ဆိုးကျိုးများကို လျှော့ချပစ်နိုင်သည်။